IPhone 13 wuxuu leeyahay RAM la mid ah jiilkii hore | Wararka IPhone
Apple waligeed ma bixiso macluumaad ku saabsan xusuusta RAM ee aaladeeda. Tani waa sababta oo ah nidaamka hawlgalka in uu xambaarsan yahay uma baahna xusuus aad u badan si uu si habboon u shaqeeyo taasina waxay u oggolaanaysaa inay ku rakibaan xusuusta hoose iPhone -kooda. Laakiin marka ay timaaddo iibinta badeecadda, waa xun tahay in xusuusta ka hooseyso tartanka, taas oo ka dhigaysa Apple inay iska ilaaliso warbixinta xogtan muhiimka ah. Si kastaba ha ahaatee, beta ee Xcode 13 ayaa shaaca ka qaaday RAM ee iPhone -ka cusub 13. Halka Qaddarka Pro wuxuu gaarayaa 6 GB, iPhone 13 iyo 13 mini waxay joogaan 4 GB. Xogtan ayaa ah la mid ah xusuusta iPhone 12 soo bandhigay bishii September ee sanadkii hore.
6 GB oo RAM ah oo loogu talagalay iPhone 13 Pro iyo 4 GB oo RAM ah oo loogu talagalay iPhone 13 iyo 13 mini
Furaha helitaanka macluumaadkan ayaa ku jira koodh qarsoon oo ku jira Xcode 13 beta. Sida dhacdooyinkii kale, betas -kan ayaa noo oggolaanaya inaan helno macluumaadka ku habboon aaladaha aan weli gacantayada ku jirin. Waxay horeyba ugu dhacday sanadkii la soo dhaafay iPhone 12 iyo laba sano ka hor oo leh iPhone 11 kaas oo aan awoodnay inaan ka soo saarno macluumaadka qalabka gudaha iyada oo loo sii marayo bet -ka Xcode ee Apple siiso soo -saareyaasha marka la dhammeeyo furaha Sebtember.
Soo -saareyaasha ayaa soo saaray macluumaadkaas waana suurtogal in la ogaado RAM -ka cusub ee iPhone 13. Xusuustaani waxay u oggolaanaysaa iPhone -ka inuu si ku -meel -gaar ah u kaydiyo xogta isagoo tirtira dhammaan macluumaadka marka aaladda dib loo bilaabo ama la damiyo. Xaddiga RAM wuxuu la xiriiraa waxqabadka aaladda, laakiin beddelka nidaamka qalliinka ee ay tahay inuu awood u yeesho inuu hagaajiyo kheyraadka ayaa sidoo kale soo dhex gala. Nidaamka hawlgalka oo si fiican u hagaajiya khayraadka uma baahnaan doono xaddi badan oo RAM ah si uu si habboon ugu shaqeeyo, sida ka jirta IOS iyo iPadOS.
Marka laga hadlayo iPhone 13 waxaa la ogaaday in la wadaag RAM isku mid ah iPhone 12. IPhone 13 iyo 13 mini waxay wataan xusuusta 4 GB, halka moodooyinka Pro iyo Pro Max ay kor u qaadayaan xusuusta 5 GB, sida dhiggooda jiilkii hore. Macluumaadkan waxaa la xaqiijin karaa marka cutubyada ugu horreeya la helo dhawr toddobaad gudahood. Si kastaba ha ahaatee, isha waxay la mid tahay sidii jiilalkii hore oo dhan iyo dhammaantood xogtaan waaqiciga lagu heshiiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » IPhone 13 wuxuu leeyahay xusuusta RAM oo la mid ah jiilkii hore
Kiiboodh buuxa oo ku yaal shaashadda cusub ee Apple Watch Series 7